Zimbabweans face gloomy holidays - Deseret News
By Associated Press Dec 25, 2013, 9:42am MST
Share All sharing options for: Zimbabweans face gloomy holidays
In this image taken Monday Dec. 23, 2013 a family heads for the bus in Mbare,Harare, for a trip to rural areas in Harare. Thousands of city-dwelling Zimbabweans travel back to their rural homes during the holiday season, taking gifts and foods for feasts to share with their families. But this year, the holiday spirit has been dimmed by Zimbabwe's worsening economic situation marked by company closures and job losses. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
In this image taken Monday, Dec., 23, 2013 a bus is loaded in preparation for a journey to rural areas in Harare. Thousands of city-dwelling Zimbabweans travel back to their rural homes during the holiday season, taking gifts and foods for feasts to share with their families. But this year, the holiday spirit has been dimmed by Zimbabwe's worsening economic situation marked by company closures and job losses. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
In this image taken Monday Dec. 23, 2013 vendors sell different products in an open air market in Mbare, Harare. Thousands of city-dwelling Zimbabweans travel back to their rural homes during the holiday season, taking gifts and foods for feasts to share with their families. But this year, the holiday spirit has been dimmed by Zimbabwe's worsening economic situation marked by company closures and job losses. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
In this Monday, Dec. 23, 2013 image a passenger looks through the window of a bus headed for the rural areas in Harare. Thousands of city-dwelling Zimbabweans travel back to their rural homes during the holiday season, taking gifts and foods for feasts to share with their families. But this year, the holiday spirit has been dimmed by Zimbabwe's worsening economic situation marked by company closures and job losses. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
In this image taken Monday Dec. 23, 2013 a bus is loaded in preparation for a journey to rural areas in Harare. Thousands of city-dwelling Zimbabweans travel back to their rural homes during the holiday season, taking gifts and foods for feasts to share with their families. But this year, the holiday spirit has been dimmed by Zimbabwe's worsening economic situation marked by company closures and job losses. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
HARARE, Zimbabwe — Thousands of city-dwelling Zimbabweans travel back to their rural homes during the holiday season, taking gifts and foods for feasts to share with their families.